Madaxeyne Lafta-gareen oo diiday muddo kordhinta loo sameeyay Farmaajo - Wardeeq 24 TV Madaxeyne Lafta-gareen oo diiday muddo kordhinta loo sameeyay Farmaajo Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Madaxeyne Lafta-gareen oo diiday muddo kordhinta loo sameeyay Farmaajo
Madaxeyne Lafta-gareen oo diiday muddo kordhinta loo sameeyay Farmaajo
Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa goor dhow caddeysay mowqifkeeda ku aadan Go’aankii Galmudug, Hirshabeelle iyo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta uga soo horjeesteen muddo kororsiga Farmaajo.
Koonfur Galbeed ayaa soo dhaweeysay Go’aankii ay muddo kordhinta ka qaateen Qoorqoor, Cali Guudlaawe iyo taageerada uu muujiyay Ra’iisul Wasaare Rooble, iyagoona caddeeyay inay taageersan yihiin Go’aankaas.
War-saxaafadeed kasoo baxay Maamulka ayaa lagu sheegay inay ka go’an tahay in dalka la badbaadiyo, isla markaana la qabto doorasho Deg-deg ah oo heshiis lagu wada yahay, lagana fogaado wax kasta oo keeni kara qalalaaso siyaasadeed.
Maamulka Madaxweyne Cabdicaiis Xasan Maxamed Lafta-gareen ayaa caddeeyay inay diyaar u yihiin fulinta heshiiskii 17-kii September laga gaaray doorashada, kaasi oo markii dambe la isku qabsaday fulintiisa.
Maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa horey u taageeray Go’aankii Galmudug, Hirshabeelle iyo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta uga soo horjeesteen muddo kordhinta loo sameeyay Madaxweyne Farmaajo.
Previous articleMusharaxiinta oo taageray Go’aankii Hirshabeelle, Galmudug iyo K/Galbeed
Next articleFarmaajo oo Caawa ka hadlaya xaaladda Cakiran ee dalka iyo Doorashada